Fursadaha Aasaasiga ee NCS - Akhri kani si aad uga qayb qaadato! - Bulshada Caaqilnimada
Waxaan rajeyneynaa in adiga / qofka dhalin yaraa uu waqti fiican nagu qaatay nala siiyay NCS xagaagaan, waxaana jeclaan laheyn inaan aragno inaad safarkaaga sii wadato iyada oo loo marayo mid ka mid ah barnaamijyada qalin jabinta.
Xulashada Kulanka Maqalka Guddiga Dhalinyarada
Date: 2nd Oktoobar 2018
Time: 6pm ilaa 7pm
Info: Element The Board of Youth wuxuu sawiraa waxkasta oo aan qabano sida samafalka! Waxaad ka caawin doontaa qorsheynta jadwalka sanadka soo socda, abaabulo munaasabadaha iyo ololayaasha dhalinyarada magaalada oo idil ka qayb qaadan karaan kana caawin kara qaabeynta bulshada degaanka oo ka yaryar aragtida dhalinyarada.
Sida loo saxeexo: U soo soco shirarka soo-kicinta oo aad wax badan ka ogtahay ama email aad ku leedahay Richard.r@elementsociety.co.uk si ay uga wada hadlaan ku lug lahaanshaha.
Hogaamiyeyaasha Tababarka Aqoonsiga Tababarka:
Waqtiga: 6pm - 7pm
Info: Tababarkaan bilaashka ah wuxuu ka kooban yahay qaybo ka mid ah Hogaaminta, Kooxda Dhaqanka, Xirfadaha Kala duwanaanta iyo Xirfadaha Xirfadaha. Tabobarkani wuxuu ujeedkiisu yahay inuu ku siiyo darajada markaad u soo baxdo adduunkana sidoo kale waa talaabooyinka ugu horeeya ee la qaado haddii aad xiiseyneysid inaad ka shaqayso NCS mustaqbalka.
Xulashada Kulanka Ciyaaraha Champions:
Info: Xulashada Champions League waxay naga caawineysaa inaan ku faafinno ereyga ku saabsan NCs ee iskuulada / kuleejka agagaarka Sheffield. Waxaan kaa helaynaa adiga oo leh niyad jab iyo taageero kaa siiya tababaro bilaash ah si aad nooga caawiso qaylada fursadaha NCS ee xagaaga 2019!
Sida loo saxeexo: Kugu yimaada kulankan soo socda iyo inaad wax badan ka ogaato ama email aad ku hesho Richard.r@elementsociety.co.uk si ay uga wada hadlaan ku lug lahaanshaha.
Barnaamijka Qalabka Element-ka:
Info: Waxaan rabnaa in aan hubino in arday kasta oo qalinjebiyay NCS uu dib ula xiriiri karo oo lala hadlo xubin ka mid ah shaqaalahayaga. Nidaamkayaga Mentorka ayaa kuugu dhiirigelinaya inaad saxiixdo oo aad xubin ka noqoto shaqaale ahaan hagaha. Anagu ma khabiiro laakiin waxaan ku faraxsanahay inaan indhahayaga ku soo aruurinno arjigaaga CV / uni ama kaa caawiyo codsiyada shaqada iyo wareysiyada.
Sida loo saxeexo: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk si ay uga sheekeeyaan ku helida xubin loo doorto.
Element Elementary Program Brokerage Volunteer Program:
Info: Haddii laguugu dhiirigeliyey inaad sii wadatid isbeddel ku yimaada bulshada degaankaaga laakiin aadan ogeyn tallaabooyinka aad qaadanaysid markaa fursadani adiga ayaa adiga kuu ah! Waxaan kaa caawinaynaa inaad raadiso fursado aad xiiseyn karto oo ku taageeri karto adiga oo saxiixaya.
Sida loo saxeexo: Email Rich on Richard.r@elementsociety.co.uk waxaanu kuu qabanqaabin doonaa maalin / maalin haboon si aad ula hadasho xubin shaqaale ah fursado.